Simple but unfamiliar personal development
Wai Yan Kyaw 1 Jun, 2021
Personal Development ဆိုတာက လူတစ်ဦးရဲ့ ဗဟုသုတ၊ အဆင့်အတန်း၊ ဘဝကဏ္ဍတိုင်းမှာ မိမိကိုယ်ကို ပိုကောင်းလာဖို့ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီး မိမိရဲ့ မူလစွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ခြင်း၊ လူ့အရင်းအနှီးကို တည်ဆောက်ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေကို တိုးမြှင့်ခြင်း၊ ဘ၀ရဲ့ အရည်အသွေး၊ အိပ်မက်မျှော်မှန်းချက်တွေကိုအကောင်အထည် ဖော်ခြင်းစတာတွေနဲ့ အရိုးရှင်းဆုံး အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လို့ရပါတယ်။
Personal Development ဆိုတာ ဘာလဲ?
ပညာဆိုတာက သေတဲ့အထိ သင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက် Personal Development ကလည်း မိမိသက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး ပါဝင်ပတ်သက်နေမှာပါ။ Personal Development ဆိုတာက ဆရာတွေ၊ အကြံပေးအတိုင်ပင်ခံတွေ၊ မန်နေဂျာတွေ၊ နည်းပြတွေက အခြားသူတွေကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် သင်ကြားပေးတာကို မဆိုလိုပါဘူး။ မိမိ ကိုယ်ပိုင်စွမ်းရည်နဲ့ ကိုယ်တိုင်လေ့လာ သင်ကြားတာကို Personal Development လို့ ခေါ်နိုင်ပါတယ်။
Personal Development မှာ ဘာတွေပါဝင်လဲ?
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်တဲ့ လေ့ကျင့်ဆောင်ရွက်မှုတွေက Personal Development ဖြစ်ပြီး ကိုယ်တိုင် အသိအမြင်(အသိပညာ) တိုးတက်လာအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ Skills တွေကို ပိုတိုးတက်လာအောင် ပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အသစ်တစ်ခုကို လေ့လာသင်ယူခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်တစ်ခု တိုးလာခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း သို့မဟုတ် လူသားအရင်းအနှီးကိုတည်ဆောက်ခြင်း၊ လူနေမှုပုံစံ သို့မဟုတ် ဘဝရဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကို မြှင့်တင်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်း၊ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု သို့မဟုတ် လူမှုရေးအဆင့်အတန်းကို တိုးတက်စေခြင်း၊ မျှော်မှန်းချက်ကိုဖြည့်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ခြင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အစီအစဉ်များ Personal Development Plans (PDPs) ကိုသတ်မှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း စတာတွေ ပါဝင်နေပါတယ်။
Personal Development အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် အချက် (၈) ချက်
ကိုယ့်ကိုယ်ကို တိုးတက်စေမယ့် အကြောင်းအရာတွေနောက်ကိုလိုက်ပါ။ နည်းလမ်းတွေကို အမြဲရှာဖွေနေပါ။ သင်ရဲ့ Personal Development လမ်းစဉ်ကို တိုးတက်စေမယ့် အချက် (၈) ချက်ရှိပါတယ်။ အချို့အချက်တွေက ရိုးရှင်းတဲ့ နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ချက်တွေဖြစ်တာမို့ သင် လုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါ။
၁။ နေ့တိုင်း စာဖတ်ပါ
စာပေတွေကို လေ့လာပါ။ အကျိုးဖြစ်စေမယ့် စာအုပ်စာပေတွေကို ဖတ်ပါ။ ဖုန်းသုံးနေတာထက် စာအုပ်ဖတ်နေတာက ပိုအကျိုးရှိပါတယ်။
၂။ ဘာသာစကားအသစ်ကို လေ့လာပါ
ဘာသာစကားဆိုတာက မလေ့လာခင်မှာ အတိုင်းအတာတစ်ခုလောက် ကြောက်ဖို့ကောင်းပေမယ့် နေ့စဉ်ထိတွေ့နေရင် ရိုးရှင်းလွယ်ကူသွားမှာ အသေချာပါပဲ။
၃။ ဝါသနာအသစ်တစ်ခုကို တိုးချဲ့ပါ
သင်ရဲ့ ပုံမှန်အကြိုက်ဆုံးဝါသနာတွေ အပြင် သင်နောက်ထပ်ကြိုက်တဲ့ အသစ်တစ်ခုရှိသေးလား။ ဒါမှမဟုတ် သင်လေ့လာချင်တဲ့ အားကစားသစ်တစ်ခုရော ရှိပါသလား။ သင်ရဲ့ ဝါသနာသစ်က သင့်အတွက် အပန်းဖြေဝါသနာတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
၄။ သင်ခန်းစာ သစ်တွေ ထပ်တိုးလေ့လာပါ
သင်တန်းတွေက မိမိကိုယ်ကို တိုးတက်စေဖို့ အတွက် ဗဟုသုတအသစ်တွေနဲ့ Skill အသစ်တွေရရှိစေတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်က လက်ရှိထက်ပိုပြီး တတ်မြောက်ဖို့အတွက် ပိုလေ့လာသင့်ပါတယ်။
၅။ Inspirational Room တစ်ခုဖန်တီးပါ
သင်ရဲ့ နေ့တိုင်းတွေ့မြင်နေရတဲ့ ပတ်၀န်းကျင်က သင့်အတွက် စိတ်နေ စိတ်ထားနဲ့ အပြုအမူတွေကို ပုံဖော်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ အခန်းတစ်ခန်းက သင့်ရဲ့ စိတ်ကို ကြည်လင်လန်းဆန်းမှု မပေးစွမ်းနိုင်ပါဘူး။
၆။ အကြောက်တရားကို အန်တုပါ
သင်က လူတွေရှေ့ စကားပြောရမှာကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း သို့မဟုတ် တစ်ခုခုကိုစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်စေ စတဲ့ တချို့သောကြောက်ရွံ့မှုတွေက သင့်ဘဝတိုးတက်မှုကို နှောင့်နှေးစေပါတယ်။
၇။ သင့်ရဲ့ skills တွေကို မြှင့်တင်ပါ
သင့်ရဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းတွေကို တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်းနဲ့ မြှင့်တင်ဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေပါ။ (ဥပမာ- သင်ကဂိမ်းကစားရတာကြိုက်တယ်ဆိုပါစို့။ ဒါဆို သင်က ဂိမ်းထဲမှာ ပိုကောင်မွန်တဲ့ သူများတဲ့သာတဲ့ အနေအထားတစ်ခုမှာ ရပ်တည်နေနိုင်ဖို့ အမြဲတမ်း လေ့ကျင့်နေရပါမယ်။)
ပုံမှန်အားဖြင့် လူငယ်တွေက Online မှာပဲ Social Media တွေနဲ့ အချိန်တွေ ကုန်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို လျော့ချပြီး ကိုယ့်အတွက် အကျိုးရှိစေမယ့် ကိစ္စအချို့ကို တန်ဖိုးထား လုပ်ကိုင်သင့်ပါတယ်။ Personal development လုပ်ဖို့အတွက် မပျင်းဖို့က အဓိကကျသလို လေ့လာမှုတိုင်းက တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ အားလပ်နေတဲ့ အချိန်တွေကို အလကားသက်သက် အချိန်ကုန်မခံဘဲ အကျိုးရှိရှိ အသုံးချနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
4 Channels to Celebrate New Year Countdown asaVirtual Show
Win MM Htay 24 Dec, 2020
Between USD 40 ~ 80 and 70 Free Courses with Certificate